Waa maxay ifafaalaha La Niña | Saadaasha Shabakadda
Waxaad u badan tahay inaad maqashay ifafaalaha saadaasha hawada ee loo yaqaan El Niño sanadkii la soo dhaafay. Waxa laga yaabo inaadan ogeyn waa inay jirto dhacdo gebi ahaanba ka soo horjeedda oo heshay magaca La Niña taasina badanaa waxay ku dhacdaa taariikhahaas, marka dhacdada El Niño ay dhammaato.
Kadib wax yar ayaan kaaga sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan La Niña iyo saamaynta ay ku soo saarto meelo kala duwan oo meeraha ah.
Dhacdooyinka La Niña badanaa waxay sababaan hoos u dhac ba'an oo heer kulka iyo xilliyo adag oo abaaro ah oo ka dhacayey meelaha ku dhow Badweynta Baasifigga. Badanaa waxay qaadataa dhowr bilood kan ugu daran wuxuu dhacay sanadka markuu ahaa 1988/1989.
Marka laga hadlayo saameynta ay soo saarto, waxaa habboon in la muujiyo xoojinta dabaylaha aaladaha ee sababa heerka badda inuu hoos u dhaco xeebaha Colombia, Ecuador iyo Peru. Waxaa jira isku uruursi heerkul sarreysa oo ku jira baddaha aagga dhul-ballaadhleedka Baasifigga kaasoo sababa daruuro badan iyo roobab aad u daran.
Dhacdooyinka La Niña aad ayey uga sii daran yihiin markay yaryihiin waqtiga iyo saameynta ugu weyn waxay badanaa dhacdaa bilaha ugu horeeya ee dhacdadan. Si ka duwan El Niño, La Niña waxay u dhacdaa si isdaba-joog ah muddada u dhexeysa 4-7.
Sida laga soo xigtay macluumaadkii ugu dambeeyay ee khubarada ku saabsan mowduucan, ifafaalaha El Niño ayaa sii faafaya maaddaama oogada sare ee badda ay qaboojineyso, Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadani waxay tilmaan u tahay imaatinka ifafaalaha aan soo sheegnay ee La Niña. Saadaasha khubarada saadaasha hawadu sinaba uma wanaagsana waxayna u muuqataa in La Niña ay isku beddeli karto mid ka xun El Niño laftiisa. Waa inaan sugnaa dhowr toddobaad si aan u ogaanno baaxadda dhacdadan gebi ahaanba lid ku ah ifafaalaha caanka ah ee El Niño.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay ifafaalaha La Niña?